Maalqabeen Sagaal Milyan Oo Doolar Siinaya Dadka Ku Xidhan Bartiisa Twiter-Ka – somalilandtoday.com
Maalqabeen Sagaal Milyan Oo Doolar Siinaya Dadka Ku Xidhan Bartiisa Twiter-Ka
(SLT-Japan)-Warbaahinta Bloomberg, NBC News, CNBC iyo ABC ayaa kusoo warramay in bilyaneer u dhashay dalka Japan, laguna magacaabo Yusaku Maezawa, sanadkii horena caan ka noqday dunida kadib markii uu qeybiyay lacag aad u badan uu haatan markale sheegay in uu bixinayo lacag dhan sagaal milyan oo doolar.
Lacagtan ayuu sheegay in la siin doona kunka qof ee nasiibka u yeeshay, taas oo qeyb ka ah buu yidhi tijaabo uu ku sameynayo bal in lacagta caddaanka ama kaashka ah ay ka farxi doonta dadkaas.
Maezawa waxaa u madax ka yahay shirkad ku shaqeysa dhanka Internka oo ka shaqeysa nashqadaha ama faashonka dharka, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay lacag dhan saddex bilyan oo doolar.
Loolanka loogu jiro helitaanka lacagta ayuu shuruud ku xidhay, waxaana shuruudaha lagu xidhay kamid ah in qofk ay da’diisu ka sareyso 13 sanno, kuna nool yahay gudaha dalka Japan.
Wuxuu sheegay in uu aad uga xun yahay in abaalmarintii uu bixiyay sanadkii hore aanu fahfaahin dheeraad ah ka bixin, wuxuuna sharraxaad ka bixiyay ujeedada uu ka leeyahay arrintan.
Waxaa kale oo uu sheegay in uu doonayo in dadka uu ka ogado sida lacagtaas ay u saameyn doonta noolal maalmeedkooda, tanina ay tahay fursad uu dadka kula hadlo.
Ninkan ayaa nqonaya qofkii ugu horeeyay dunida ee dalxiis ku taga hawada sare, waxaan safarkan lagu wadaa in uu bilawda sannadka 2023-ka.